Apple inotumira kukoka kuWWDC16 | IPhone nhau
Ikozvino zviri pamutemo. Pave nenguva kubva patakabvunza Siri nezve iyo WWDC16, mubatsiri wedu akapupura kwatiri kuti zvaizoitika pakati paJune 13 na17, asi mhinduro yemubatsiri haisi chinhu chatingati "mukuru". Zvino, maminetsi mashoma apfuura, vanhu veCupertino vatumira memo yekupinda musangano weApple wepagore wekuvandudza uko kunotevera software yekuvandudza ichaunzwa.
Chirevo chekutanga chichaitika pa 13 yeJune na10am Pacific, iyo inopindirana neiyo purogiramu yanga iri tsika kwenguva yakareba sekurangarira kweseva. MuSpain (gare gare ndichagadzirisa nemarongerwo mune dzimwe nyika) ichaitwa na19: 18 masikati uye kwete naXNUMX: XNUMXpm saMarch, ichichinja iyo nguva nekuti muUnited States yakashandurwa kuita nguva yezhizha pamberi muEurope. Chiitiko ichi chichaitika paBill Graham Civic Auditorium muSan Francisco, chivakwa chinogona kugarisa vateereri vazhinji kupfuura Moscone West, uko kwakaitika makore apfuura.
1 Keynote maawa emaJune 13
2 Chii chatichaona paWWDC16
Keynote maawa emaJune 13
Mekisiko Guta 12: 00h
Korombiya: 12: 00h
Ekwadho: 12: 00h
Dominican Republic: 13: 00h
Kosita Rika: 11: 00h
Pota Riko: 13: 00h
Borivhiya: 13: 00h.
E Savhadho: 11: 00h
Nikaraguwa: 11: 00h
Kiyuba: 13: 00h
Kuti uve nechokwadi, tinogona zvakare kuziva iyo chaiyo nguva kubva IZVI ZVINONZI.
Chii chatichaona paWWDC16
Chii chatichaona paWWDC16? Zvakanaka, kana pasina zvikatyamadza zvakakura, shanduro nyowani dzeIOS, OS X, watchOS uye tvOS. Vazhinji vashandisi vangade OS X neIOS kuti ishanduke uye iyo nyowani yekushandisa system kuti itumidzwe chimwe chinhu senge iOS X, asi kazhinji vanozopa zuva iro iOS 10, OS X 10.12, watchOS 3.0, uye tvOS 10.
Kune rimwe divi, ivo vanotarisirwawo kuendesa iwo maApple mumhanzi ekushandisa, ndokuti Apple Music ine dhizaini nyowani uye mashandiro, pakati payo ini ndaizoratidzira mukana wekuverenga mazwi enziyo pasina kuisa chero chinhu, kana kuti Connect ichatora chikamu chechipiri, ichinyangarika Tab yacho uye ichingowanikwa chete kubva pamapeji eumwe muimbi. ITunes uye iyo iOS Music app zvakare ine runyerekupe rwekubatana, asi izvi zvinoita sezviri kuomera kwandiri. Chero zvazvingaitika, izvo zvakasimbiswa ndezvekuti WWDC16 ichatanga muna Chikumi 13.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inotumira kukoka kweWWDC16. Tarisa nguva yechiitiko munzvimbo yako